musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Nei uchienda kuHawaii izvozvi? Shanyira imwe nguva!
Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Iko hakuna chikonzero chekuenda kuHawaii izvozvi meseji kumusangano wanhasi wenhau naGavhuna Ige. Wakatora here zororo rako kuenda kuHawaii? Ungangoda kufunga nekukurumidza. Iyo Aloha Nyika yakatarisana nedutu remhepo mitsva yeCOVID-19 kesi uye inogona kunge isina kugadzirira kubata izvo zviri kuuya nenzira yayo. Nhasi raive rekodhi zuva remarekodhi mumatambudziko matsva. Zano rakanakisa naDr.Char, Director weHawaii Dhipatimendi Rehutano, nderekuti GARA HOME!
Elizabeth A. Char, MD, vakatora hutungamiriri hweHawaii Dhipatimendi rezvehutano munaGunyana 16, 2020, mushure mekugadzwa naGavhuna weHawaii David Ige.
Mumusangano wevatori venhau nhasi naGavhuna weHawaii Ige, akakurudzira vanhu muHawaii nevashanyi kuti vagare kumba uye vasafambe panguva ino.
Nhasi, 1,167 dzekuwedzera hutachiona muHurumende yeHawaii zvakataurwa, inopfuura nekaviri nhamba yepamusoro yakambonyorwa kubvira pakatanga hutachiona.
Kupararira kwehutachiona hakuzo shanduke kudzamara tachinja, ane kutya zvikuru Elizabeth Char akaudza vatori venhau kumusangano wevatori venhau wakadaidzwa naGavhuna weHawaii Ige mangwanani ano.
Mune yazvino COVID-19 mushumo kubva kuHurumende ye Aloha Nyika, pane 1,167 mitsva kesi dzeCOVID, zvichiunza zviitiko zvacho kusvika pari zvino pa49,564. Pane avo 2,971 vaida kuiswa muchipatara.
Nepo chipatara nzvimbo ichiri kuwanika, kukura kuri kuita mweya nenharaunda kupararira kweiyo COVID-19 Delta musiyano inobvisa mweya kwete chete kune vanorwara asi kune wese munharaunda.
Pakabudiswa bhuku iri vashanyi izvo zvitsva zvinorambidzwa ichave iri munzvimbo, tanga tisingazive kuti yakaipa sei mukati memazuva mashoma mana.
Ndapota ita chinhu chakakodzera uye enda kuHawaii imwe nguva!
eTurboNews muverengi, Mai J, vakatumira chirevo kubhuku rino vachiti:
Handidi kukurudzira kuuya kuHawaii panguva ino. Kunyangwe paine chero zvirambidzo zviri pano mumavhiki maviri, iwe unonyatsoda here mukana wekurapwa nechimbi-chimbi uye unovimba kuti mumwe mukoti murombo kana chiremba arikushanda kwavo kwakapetwa katatu kana katatu achave nenguva yekukupa kurapwa kwakaringana?
Zvinhu zvinogara zvakazara kana isu tine nhamba dzakakwirira dzevashanyi. Zvinogona kuva dambudziko chairo kupinda muresitorendi kubvumidzwa makumi mashanu muzana kugara.
Vagari vanogona kana kuita zvisingaite kumeso kwako asi kana vana vedu vari muchipatara, vazhinji vedu hatidi kuti iwe utore mishonga yedu yekurapa.
Ndoziva rwendo rwako rwakabhadharwa, asi ndege zhinji dziri kuve dzakachinjika parizvino uye dzichida kukupa iwe kiredhiti chikwereti. Nezve pekugara pako, unogona kutsanangura kuti urikuyedza kuita zvakanaka nekusada kubhadharisa zviwanikwa zvedu nekuona zvinoitika.
Ndokumbirawo muite chinhu chakakodzera uye muuye imwe nguva.
Gavhuna Ige akakanganisa paakataura kuti kumisikidza zvimwe zvirambidzo hakusati kuri mundiro. Sezviri pachena, zvikonzero zvehupfumi zvinotungamira, sezvazvinoita muFlorida, Texas, Louisiana, nedzimwe nyika zhinji dzeUS.
Parizvino, 77.98% ematunhu ese eUS, anova matunhu 2,511, arikunyora huwandu hwepamusoro uye huwandu hwevanhu vanopararira hutachiona hunouraya, neinopfuura gumi muzana yezviitiko zvitsva pavanhu zviuru zana.
Vazhinji vanoti Hawaii haigone kumisikidza kumiswa kwehupfumi hwayo hwekushanya. Kunyangwe zvirambidzo zviripo zvinosanganisira maski-kupfeka, 50% yekugara mazinga mumaresitorendi, uye miganho yezvitoro - pane zvese zvinongofananidzira. Mwaka wadarika, kuwedzera kwezana chete kesi dzeCOVID pazuva kwakakonzera nyika nguva dzekudzoka uye kukwana kwakakomberedzwa nemahotera, zvitoro, uye maresitorendi akavharwa.
Senguva dzose, iyo Hawaii Tourism Chiremera inoramba yakanyarara uye isiri kupindura kuvagari, vashanyi, uye vatori venhau. Mazuva ano 1,167 mitsva mitsva iri kudarika mutsvuku mutsetse wevagari, asi ndiani ari kuteerera?
61.2% yehuwandu hwevanhu hwazara jekiseni. Nyaya dzese dzakataurwa mumazuva gumi nemana apfuura dzaive 14. Hwevanhu vakafa kusvika pari zvino vari mazana mashanu nemakumi manomwe nenomwe.
Isu tave kugadzirira dutu remhepo mumatambudziko eCOVID, Gavhuna weHawaii akadaro nhasi. Anozivikanwa saGavhuna anogara akadzikama, akaonekwa achizungunuswa pamusangano wenhau nhasi.
Mukupindura mutori wenhau weAP, Gavhuna akafunga chete 2% yezviitiko zvitsva zviri pakati pevashanyi. Vashanyi vanofanirwa kunge vaine bvunzo dzisina kunaka kana mapepa ekudzivirira.
Vaya vane mapepa ekudzivirira vanogona kunge vaine hutachiona uye vachipararira, asi izvi hazvingambozivikanwa.
Gavhuna akataura kuti njodzi yakanyanya kupararira kwehutachiona munharaunda. Munhu mumwe chete anogona kuzvipa kune vamwe chiuru. Gavhuna uye Director wehutano wenyika vanotenda kuti hutachiona huri munharaunda, kwete kubvuma vashanyi vari munharaunda dzakafanana.
Munyika yake, vatungamiriri veHawaii vanodavira kuti vashanyi vanowanzoenda munzvimbo dzavo pazvitsuwa, kazhinji maresitorendi akasiyana uye mahombekombe. Izvi hazvizivi kwazvo uye zviri kure kwazvo nechokwadi. Pazvitsuwa zvidiki zvakaita seHawaii munhu wese anovhengana nemunhu wese, vashanyi vari kwese kwese, uye Waikiki kana Lahaina hadzisi dzega nzvimbo dzakakomberedzwa.
Dr. Char vaive vechokwadi pavakataura kuti hapana chikonzero chekuti chero munhu afambe panguva ino. Akawedzera kuti: "Hauzomboziva kuti unogara nani padivi pendege."
Vashanyi vari kutarisana nemitemo mitsva yekufamba yeHawaii.
Tora matanho kana uri muHawaii!
Nyamavhuvhu 13, 2021 pa20: 50
Mahalo Ingrid yemhinduro yako yemutsa. Kutenda nekuverenga kwedu. Tese tine hanya. Ini ndakaenda kuno muna 1988 uye ndanga ndichishanda muindasitiri yekushanya kubva 1976.
Zvinondirwadza kutaura kuti Tourism inofanira kumira! Asi zvinoita kusvikira tawana chaiyo kubata pane ino isina unchartered nguva dambudziko.
Nehurombo, hapana nzira yakajeka mudunhu rino, uye vatungamiriri vezvekushanya (HTA zvakananga) vanga vakanyarara nguva dzese kubvira COVID-19 yatanga.
Ingrid Peterson anoti:
Nyamavhuvhu 13, 2021 pa20: 36
Ndatenda zvikuru nekutumira iri meseji! (Kubva kune mugari akatamira pano achiri mudiki muna 1963.)
Nyamavhuvhu 13, 2021 pa20: 35